Digniinaha Muhaajiriinta | LawHelp Minnesota
Immigration Warnings (PDF)500.9 KB
Kuma aan joogo Mareykanka (U.S.) si sharci ah, laakiin, waxa aan doonayaa inaan codsado sharci si aan si sharci ah halkan ugu joogo mustaqbalka.
Ma jiraan wax aan samayn karo hadda si aan u badiyo fursadahayga helida sharci hadhow?
Hadii aad ku joogto Mareykanka (U.S.) ogolaansho la’aan, waxaad jabinaysaa Sharciga Laanta socdaalka ee Mareykanka (U.S.).Waxaad ku jirtaa khatar ah inay ku xirto Hay’ada Laanta Socdaala & Kastamka (ICE) iyo in lagu masaafuriyo. Hadii aadan ku joogin halka sharci, laakiin aad rajaynayso inaad maalin uun hesho, waxa jira wax aad samayn karo si aan u badiyo fursadahayga helida martabad sharci hadhow.
Ogow xaquuqdaada Kana fogow dhibka
Ka fogow dhib. Ha ka qayb qaadan arrin dambi ah. waxay kaa ilaalin kartaa inaad sharci heshid iyo inay dhacdo in lagu ba masaafuriyo. Iska ilaali la xiriir boolis ama hay’ada sharci ilaalinta hadii aysan lagama maarmaan ahayn. Meelaha qaar, booliska xaafadu waxay la shaqeeyaa mas’uuliyiinta laanta socdaaalka, iyo waxa dhici karta inay wacaan ICE hadii ay u maleeyaan inaad sharci daro tahay.
Hadii u ku joojiyo boolis, Xaq waxaad u leedahay inaad Aamusnaatid. Hadii aad rabto aamusnaan, U sheeg askariga. Minnesota, waa sharci inaad is sheegtid cida aad tahay. Marka sii sarkaalka magacaaga sharciga oo buuxa iyo warqada aqoonisga.
Hadii uu boolis ku su’aalo martabadaada sharci ee wadanka, Xaq waxaad u leedahay inaad iska Aamusnaatid. Qasab kugu ma aha ka jawaabid goobta aad ku dhalatay, Inaad muwaadin Mareykanka (U.S.) tahay, ama sida aad ku soo gashay United States. Hadii bilaysku kuu kaxeeyo xabsi Qasab kugu ma aha ka jawaabid su’aalaha ku saabsan martabada sharcigaaga, Qasab kuguma aha iyana inaad la hadasho hay’ada (ICE).
Laakiin, waa inaad wacdaa bilayska iyo adeega xaalada deg-dega hadii aad u baahan tahay, sida inaad soo sheegid dambi, ama helida daryeelo caafimaad. Dhibanayaasha dambiyada qaar waxa suurto gal ah inay helaan xaalada gooni ah dhanka sharciga ah hadii ay soo sheegaan dambi ayna la shaqeeyaan hay’adaha sharci ilaalinta si ay u baaraan dambiga dacwadna u oogaan.
Hadii aad leedahay taariikh dambi, Ka raadso talo qareen socdaal, ka hor inta aadan dalban martabad sharci ah gudaha Mareykanka (U.S.)
Ha sheegan inaad tahay muwaadin Mareykan ah (U.S.) Hana Codeynin
Hadii aadan ahayn muwaadin Mareykan (U.S.), Marnaba ha oran waxaan ahayn muwaadin sabab kasta ha noqotee. Tan waxa loogu yeeraa been abuur sheegasho muwaaadinimo. Hadii aad sheegato inaad muwaadin Mareykan (U.S.) tahay adigoon ahayn, waxa suurto gal ah inaadan waligaa helin sharci, iyo lagu masaafuriyo.
Codeynta ama isu diiwaan-galinta codeynta waxaa loo tixgaliyaa sheegasho muwaadinimo.
Isticmaalida dukumiintiyada muwaadin Mareykanka ah (U.S.) ah ama u sheegashada muwaadinimada shaqo darteed ama wax kale oo socdaal ama manfacyada dowlada federaalka ama gobolka bixiyo awgood sidoo kale waa been abuur sheegasho muwaadinimo.
Ka taxadar hadii aad ka baxso Mareykanka (U.S.)
Sharciga laanta socdaalku wuu ciqaabaa dadka qaarkood ee ka baxa Mareykanka (U.S.) ka dib kolkii ay halkan ku joogaan muddo ogolaansho la’aan. Hadii aad ku soo gashay Mareykanka (U.S) si sharci ah ama aad joogtay Mareykanka (U.S.) in ka badan itii la rabay inaad joogi karto, waa waxaa loo tixgeliyaa joogitaan sharci-darro.
Joogitaan sharci-darro marka kaliya ee laguu xisaabiyaa waa hadii uu dhacay ka dib April 1, 1997, iyo hadii aad jirtay 18 sano markii u dhacay.
Hadii aad ku joogtay Mareykanka U.S ogolaansho la’aan 6-12 bilood oo isku xiga, ka dibna aad baxdo, waxaa lagu saari mamnuuc ah 3- sanno.
Hadii aad ku joogtay U.S ogolaansho la’aan 12 bilood oo isku xiga, ama ka badan, ka dibna aad baxdo, waxa lagu saari mamnuuc ah 10- sanno.
Hadii aad heysato 3 ama 10-sano oo mamnuuc ah, uguma soo laaban kartid Mareykanka (U.S.) si sharci ah, ama ma heli kartid martabad sharci muddo 3 ama 10 sano.
Hadii aad leedahay xaas ama waalid si sharci ah u degan ama ah muwaadin Mareykanka (U.S.) waxaad dalban kartaa “Saamixid,” ama baajinta mamnuuc 3 - ama 10-sanno. Ma sahlana helida baajinta waxaa kaliya oo laguu ogo’laanayaa hadii aad cadayn karto dhib daran oo ku dhacay qaraabadaada.
Dadka kale ee ku joogo si sharci-darro ah Mareykanka (U.S.) waxa suuro gal aha inay haystaan Mamnuuc abid ah. Waxaa suuro gal inaad hayso mamnuuc abid ah hadii:
Aad ku joogtay Mareykanka (U.S.) ogolaansho la’aan muddo waqti oo gaaraysa 1 sanno ama ka badan, ka baxday wadanka, ka dibna aad soo laabatay ama aad isku dayday inaad ku soo laabato si sharci-darro ah,
Lagaa masaafuriyey Mareykanka (U.S.) ka dibna aad soo laabatay ama is ku dayday inaad ku soo laabato si sharci-darro ah.
Dadka haysta mamnuuca abid ah kuma gali karaan Mareykanka (U.S.) si sharci ah ama kama qaadan karaan sharci wadanka. Ma saamixi kartid mana baajin kartid mamnuuca abidanka ah, laakiin waxa aad dalban kartaa inaad ku soo noqoto Mareykanka (U.S.) hadii aad dibada wadanka ka joogtay muddo 10 sanno ah.
Mamnuuc abidanka ah, laanta socdaalku way xisaabisaa waqtiga joogiista gudaha U.S. xataa ilmaha ka yar 18. Waxaa jira qaababka lagu saamixi karo mamnuucan. Tusaale ahaan, hadii aad u xaq u yeelato fiisaha U.
Dadka ka shaqeeya gudaha Mareykanka (U.S.) waa laga canshuuraa wixii ay kasbadeen. Canshuurtu waxay bixisaa adeegyada dowlada badanaana waxa laga soo jaraa jeeggaga.
Hadii aad ka shaqeeya gudaha Mareykanka (U.S.) aadna kasbato cadad ka badan tiro macruuf ah, waa inaad xaraysaa canshuur-celinta labada canshuur celin, tan dowlada dhexe iyo tan gobolka, xataa hadii aadan haysan sharci daganaansho joogta ah. Canshuur-celintu waa hab lagu ogaado in ay dawladu ku leedahay lacag canshuur kale iyo in kale.
Waxaa dhici karta in laguu soo celiyo qaar ka mid ah canshuurtii jeegaaga laga gooyey. Xataa hadii aysan ahayn inaad xarayso canshuur iyadoo sababtu tahay in aadan kasban wax kugu filan, wali waa aad xareynsan kartaa canshuur si aad u hesho lacagta canshuur celinta.
Canshuur- celiska dowlada waa in la xareeyaa ka hor April 15 sannad kasta.
Hadii aad u baahan tahay canshuur-celin aadana haysan lambarka sooshal sakuutariga (social security), waxaad dalban kartaa Lambarka Aqoonsi Canshuur bixiyaha (ITIN). ITIN ku wuxuu u sahlayaa dadka ka shaqeeya Mareykanka (U.S.) iyagoon sharci lahayn inay canshuur-celin xareystaan.
Waad ka dalban kartaa ITIN Hay’ada Adeega Canshuurta Gudaha (IRS), ee shabakadeedu tahay www.irs.gov/, ama waxa aad wici kartaa 1-800-829-1040. Hadii aad ka codsato martabad sharci wadanka mustaqbalka, waxaa dhici karta in lagaaga baahdo inaad keento nuqulada canshuur-celinadaadii hore. Inaadan xareynin wax canshuur-celin ahi waxay adkayn kartaa helida sharci.
Kala har nuqulo aad naftaada u haysato qoraalada
Waa muhiim inaad haysato nuqulada qoraalada iyo warqadaha cadaynaya inaad ku noolayd gudaha Mareykanka (U.S.). Qoraaladaadi waxay muhiim u noqon karaan ka codsiga sharci laanta socdaalka mustabalka.
Waa inaad meel dhigataa
canshuur-celin & warqadaha W2,
warqada dhalashada & guurka,
Aqoonsi Sawir (I.D.)
rasiidhada iyo warqadaha dowlada
qoraalada la xiriira kiis dambi
amarka xukunka maxkamada
waxkasta oo la xiriira kiiskaaga laanta socdaalka, iyo
dukumiintiyada magacaagu ku qoran yahay iyo taariikhda.
Ka taxadar isticmaalka kaalmada dowlada
Ka qaadashada cayr ama manfacyada dowlada Maraykanka (U.S.) waxay saamayn kartaa arjiyadaada laanta socdaalka ee mustaqbalka. Si ay uga helaan deganaansho rasmi ah Mareykanka (U.S.), dadka qaarki waa inay cadeeyaan inaysan ku noqon doonin “culays umadda.” Culayska ku noqoshada umaddu waa qofka ku tiirsanaanaya barnaamijyada manfacyada dowlada mustaqbalka.
Hadii aad hore u heli jiray manfacyada dadweynaha way kugu adkaan kartaa inaad cadayso inaadan culays umadda ku noqon doonin mustaqbalka. Dolwadu waxay eegi sababta aad ugu baaahatay manfacyada dadweynaha iyo inta muddo aad isticmaashay inay le’kayd.
Mar-mar waa suuro gal inaad xaliso dhibkan culays ku noqoshada umadda. Waa suuro gal kiiskaaga inaad u baahato qaadashada manfacyada dowlada ee aad xaq u leedahay. La hadal qareenkaaga hadii aad su’aalo qabto.
Qaxootiga and magangeliyo helayaashu kama akama walwalaan tan. Hadii aad tahay qaxooti ama magangelyo hele, waad aad qaadan kartaa dhib la’aan manfacayada. Hubi inaad siiso degmada dhamaan akhbaarta ay ku waydiiyaan marka ay ogaanayaa inaad xaq u leedahay manfacyada dadwaynaha iyo in kale.
Dhaqaale ahaan masaariif ilmahaaga
Hadii lagugu amray bixin masruuf ilmo, bixi taa waqtigii loogu talo galay. Hadii aad ka habsaanto bixinta masruufka ilmaha ama lagugu leeyahay lacag masaariif hore oo kugu baaqatay, la gal qorshe heshiis dib u bixineed ah degmada si aad u wada bixiso.
Hadii aadan la noolayn ilmahaaga, aadana haysan amar ah bixin masruuf ilmood, hubi inaad dhaqaale ahaan gargaarto ilmahaaga. Xafido qoraada ah si aad u taageerto ilmahaaga, sida risiidhada iyo nuqulada jeegaga. Hadii aadan bixin masruufka ilmood ama dhaqaale ahaan aadan si kale u gargaarin ilmahaaga si kale, waa suuro gal in ay dhib ku noqoto helida sharciga.
Iska diiwaan geli adeega shaqada qaranka
Labka jooga gudaha Mareyknka (U.S) ee da’doodu u dhaxayso 18-25 waa qasab inay iska diiwaan geliyaan adeega shaqada qaranka. Waxaa jira dhowr waxyaabood oo laga reebo arrintan. Hadii ay da’daadu u dhaxayso 18 iyo 25, waa inaad isku diiwaan gelisaa 30 maalmood gudahood Mareykanka (U.S.). Raga aan sharciga ku lahayn wadanku xataa waa inay iska diiwaan geliyaan adeega shaqada qaranka.
Akhbaarta laga soo uruuriyo Adeega Shaqada Qaranka waxaa loo isticmaali karaa hadii Mareykanka (U.S.) uu bilaabo inuu dad u qafaalo adeega ciidanka awgeed. Akhbaarta laga soo uruuriyo adeega Shaqada Qaranka lalama wadaago hay’ada ICE.
Iska diiwaan geli adeega shaqada qaranka adigoo isticmaalaya khadka ( on-line) ah www.sss.gov/ ama tag Xafiisyada ay leedahay Boostada Mareykanku (U.S. Post Office).